Mba tsy fanendrena tsy ho hitan`ny tompon’andraikitra avy any ambony fa miainga avy any amin`ny vondron’olona ifotony dia efa miomana amin`izany ny etsy Andohatapenaka. Miandrandra fampandrosoana tena mipaka amin`ny mponina avy amin`ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny mponina sy ny fokontany ao aminy. Anton`ny fakan-kevitra amin`ny mety ho toetoetran`ny olona tokony hotendrena ho sefom-pokontany. Teny amin`ny CDA Andohatapenaka no nanohizana ny dinika atrikasa ka nahafahan`ny vondrona eny ifotony rehetra sy ireo hery velona rehetra mba hahafahana mamoaka ny lesoka teo amin`ny fitantanana teo aloha sy nanolotra soso-kevitra ny momba izay ho filoham-pokontany ka namoahana ny lisitra izay heverina fa mendrika ka atolotra ho an`ny distrika, ny prefektiora, ny minisiteran`ny atitany ary ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Adihevitra be nandritra ny fifidianana nifanesy ny resaka hala-bato satria manomboka eo amin’ny sefom-pokontany izany ny hala-bato. Firy sy firy moa ny kandidà no nitaraina noho ny fahitana fa novaina ny sefom-pokontany tato ho ato toy ny mitranga teo Antananarivo toy ny tetsy Besarety, Ivato ? Nahitana izany tranga izany koa tany Antsiranana, ny any Sakaraha, Ihosy, … Tsy dia raharahan’ny olona loatra ireo lehiben’ny fokontany saingy iankinan-javatra maro nefa izy ireo. Samy nampiasa azy avokoa ny mpitondra fanjakana nifandimby teto amin’ny fangalaram-bato amin’ny fifidianana. Fitaovana mahomby amin’ny fangalaram-bato amin’ny fifidianana ny sefom-pokontany satria miankina amin’izy ireo ny vokatra rehetra mivoaka eo ka anjaran’ny antoko sy ny kandidà tsirairay no manao izay handreseny eo anatrehan’izany.